Hevitra MPANOHARIANA | Aprily 2009 |
Tolona vaovao: Ny ady amin'ny lainga
2009-04-28 @ 22:43 in Andavanandro
Mitohy ny tolona fa amin'ny endrika hafa, na mitsahatra aza ny eny an-dalambe noho ny tsy fitiavan'ny ankamaroan'ny mpanohana ny famerenana ny ara-dalàna sy ny fitsipahana ny fanjakana nalaina tamin-kery GIDRAGIDRA dia mbola manohy azy kosa ny tsirairay. Tahaka izany ny tenako amin'ny fampahalalam-baovao madinidinika ho an'ny rehetra eny. Tena tiana tokoa ny mijery baolina fandaka ary dia ady sahala samy tsy nisy nitoko moa iny ny Barça sy ny Chelsea, ady an-kafetsena ireny. Mankafy zavatra mahafinaritra rahateo ny tena.
Misy ihany moa ny zavatra adino tsindraindray ka tsara ihany ny mampita azy, fa eto an-toerana koa tsy diso anjara amin'ny fanarahana vaovao. Voalaza moa tany Antsirabe fa tsy nisy ny famorian'olona tany ny talata 28 avrily 2009. Resaka tamin'izay olom-pantatra hafa tany no nahalalana fa izay ry zareo tany vao nifanehatra tamin'izany baomba mandatsa-dranomaso maro dia maro sy ny baomba mankarenintsofina maro izany. Tanàna milamina sy mangina ihany manko i Antsirabe amin'ny ankapobeny. Ny talata raha feno miaramila ny manodidina ny tsangambato (gara hatrany moa no ilazan'ny olona azy) dia tany Tsarasaotra kosa ny mpanohana ny ara-dalàna no namory olona ary tany ry zareo tsy nisy nanelingelina. Re ihany koa fa nisy ireny andian-jatovo mpihantsy mpitandro filaminana ireny koa tany Antsirabe ka izay no tena niasan'ny mpitandro ny filaminana. Izaho kosa moa nanao hoe efa voarara manerana an'i Madagasikara ny fihetsiketsehana an-dalambe ka izany no baiko azon'ny miaramila. Nitomany noho ny tsipoapoakan'olon-dehibe avokoa moa ny mpianatra madinika tany, ary mbola tsy nianatra ny mpianatra io andron'ny talata io. Asa hanao ahoana angaha ny ho tohin'ny tolona amin'ny manaraka (ny fantatro dia tsy isan'andro no anaovana ny tolona any fa andro mifandimby).
Ny vaovao manaraka nolazain'ny vaovaon'ny matv kosa indray moa dia ny fisodisodiana nanodidina ny tranon'i Avoko, mpitarika ny ANAWI, nataon'ny mpitandro ny filaminana hatry ny andron'ny alatsinainy folakandro ka hatramin'ny talata folakandro. Miverimberina matetika eny ry zareo, ary araka ny voalaza aza moa dia efa nisy fotoana teny am-bavahady mihitsy ny miaramila no nisy niantso tampoka indray. Siosion-dresaka moa no mandeha fa tahaka ny ao anatin'ny lisitry ny ho minisitra ao amin'ny governemantan'ny ara-dalàna no antony saiky hisamborana azy fa tsy noho ny fanakianana mivaivay nataon'ny tamin'ny mpitondran'ny HAT tao amin'ny fandaharana "resabe" (matv isaky ny zoma alina) loatra. Mpanara-baovao iray moa no nihevitra fa noho ny fisian'ny ordres sy contre-ordres (tahaka ny tamin'ny nanenjehana an'i Andry TGV fony nanao ny tolony) no mahatonga io tsy fahafaha-manapa-kevitra hentitra amin'ny fisamborana an'i Avoko io. Endri-pitarafana ny fivakisan'ny miaramila ihany koa io fa tsy mivandravandra loatra.
Fa mitady ho adino moa ny anton-dresaka, ady amin'ny lainga no lohateny ary tena miroborobo mihitsy izy io amin'izao fotoana izao. Misy moa dia tsy manana henatra intsony amin'ny fampielezan-dainga fa sao mba mahavoa ihany ny goavy manta, sady ny ohabolana malagasy rahateo manambara fa ny marina mitavozavoza tsy mahaleo ny lainga tsara lahatra. Ny nampihomehy ahy dia, tsikaritra ahy manokana hatrany izy ity an, ny fitovitovizan'ny vaovao mivoaka amin'ny haino aman-jery amin'izao fotoana izao, sy ny olona hita isan'andro amin'ny raharaha mafampana rehetra. Rehefa misy ny fisamborana olona somary malazalaza na ambonimbony dia misy dian'asan'izany Komandà Charles Randrianasoavina izany hatrany ao. Efa nisy moa ny sehatra nampalaza ny lehilahy hany ka izay lazainy rehetra lasa tsy misy azo inoina intsony, zatra ny mamoro-marina moa izy (eritrereto ilay fomba filazako azy!) nefa tena mahafalyny mpanohana ny tetezamita kosa aloha ny zava-bitany e!
Ohatra iray ary: ny vaovaon'ny tvplus indray mandeha no nanambara ny fisaina bois de rose amina trano iray eny Amboanjobe, Antananarivo atsimondrano. Nambara fa avo nofain'ny zanaka lahin'ny mpiutondra teo aloha Josoa Ravalomanana io trano nanafenana hazo sarobidy io, ary tsy fantatry ny tompon-trano izay lehiben'ny faritanin'Antananarivo tamin'ny andron-dRatsiraka atoa Rolland Ramahatra, ny fisian'ireo entana ireo. Ny ampitso indray ny gazety malaza nanambara fa nofain'ny zanaka vavin'ny filoha teo aloha Sarah Ravalomanana io trano io vao telovolana lasa izay. Tsy fantatro aloha na i Josoa ihany no Sarah fa naman'ny zanaky ny tompon-trano koa manko ny zanaky ny filoha Ravalomanana. Gaga aho fa tsy dia nisy nanamarika moa io tsikaritra io. Ny niniana tsy nolazaina tamin'ity raharaha ity dia tsy nanonona mihitsy ny tvplus hoe an-dRolland Ramahatra ny trano. Manaraka izany, nahatrarana kamiaon'ny tiko sy 4*4 Prado iray koa teny, araka ny voalaza. Ny tsy nolazaina fa hita dia notaomina tamin'io kamiao io ireo hazo ireo (mazava loatra fa na tany ihany ny lakile na efa misy moa ny mahay mampandefa fiara tsy ilàna lakile e!) ary dia tsy fantatro intsony aloha izay nandehan'ny entana kosa avy eo.
Tsikaritra hafa ihany koa, vao jerena kosa aloha ilay Ralitera Andrianandraina, talen'ny fiarovana Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana, dia hita mihitsy hoe taizan'aretina ary hita fa tsy ho afaka ny hahery fihetsika intsony ihany koa. Mitady olona ampangaina fotsiny ry Komandà Charles ary dia afatratra any amin'io olona ampangaina io avokoa ny rihitra. Rehefa be loatra ny marina foronina dia vao maika mampitombo ny tsi-finoana izany. Ny tsikaritro anankiray dia ilay pasipaoro nosaronana taratasy hafa ny anaran'olona teo ary natao ngeza be avy eo ny anarana hoe RALITERA (sorabaventy sady lehibe)... asa inona angaha ny porofo tiana avoka amin'io pasipaoro io? Atsasaka segondra no nahitako io tamin'ny vaovaon'ny tvplus sangy maso manety ny aty ka tsy maintsy mampivandravandra ny tadiavina tsy holazalazaina amin'olona (vaovao alatsinainy 27 avrily 2009 no nisy an'io).
Lasa ny eritreritro avy eo hoe, matoa nahasahy nankeny Ambohidahy anoloan'ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana hatrany ny mandala ny ara-dalàna dia efa fantany mazava tsara fa tsy hitifitra azy velively ny miaramila tao amin'io toerana io. Eritreritra fotsiny ny ahy ny hoe mety ho efa nahazo baiko hitifitra ny miaramila tao fa tsy nisy nety nanatontosa izany baiko izany, dia izay no nahatezitra ny mpanome baiko sy nahatonga ny fanafihana... saingy eritreritra ihany aloha ny ahy izany fa tsy voatery ho marina na tsy voatery ho diso avy hatrany.
Faramparany, misy ny kivy fa toa nangina ny radio na dia efa nisy aza ny fiovana fantsona handrenesana azy, izaho kosa mieritreritra fa niniana nampanginina mihitsy izy mba hanarahan'ny mpitolona ny toromarika amin'ny manaraka. Hoy moa aho hoe namitsahatra aza ny fihetsiketsehana dia mitohy ny tolona ataoko manambara mandrakariva ny marina hitako sy reko ka atokisako kokoa ny fahamarinany.
jentilisa, alarobia 29 avrily 2009 amin'ny 00: 43
Fa ho entina mankaiza ity tolona ity e?
2009-04-20 @ 21:40 in Politika
Mety ho gaga ny maro amin'ny filazako saingy tsy te-hivaona amin'ny foto-kevitro mihitsy aho. Efa fantatra ihany fa tsy mahazaka ny hetsika isan'andro eo Ambohijatovo ny sasany dia izay ihany no notohizana fa tsy niditra zavatra hafa efa niomanan'ny mpifanandrina amin'ny tena. Efa porofo mitohoka amin'ny tendany anie ny fitadiavana hanakorontana ny hetsika amin'ny alarobia ho avy izao amin'ny filazana ho fanoherana ny jadona nefa izy mpitatatata izany indrindra no manao ny jadona amin'izao fotoana izao. Efa fantatra ihany fa tsy mahasahy manao na inona na inona ny miaramila raha vao ny vehivavy ihany no mandeha fa manao ny ataony izy raha vao maro ny lehilahy milahatra an-dalambe izany na dia tsy hanao herisetra aza ireo lehilahy ireo dia nidirana ihany izany. Izao lasa miova ny toe-draharaha.
Tonga teny Ambohijatovo aho tamin'ny atoandro, mialoha ny handehanako miasa miditra amin'ny roa ora ary tsy afaka mivoaka ao intsony avy eo nohony tsy fahampian'ny mpiasa. Teo amin'ny fanaovana ny hiram-pirenena ny mpitolona no teny Ambavahady ambany aho. Nandeha ny andininy fahatelo tamin'ny "Madagasikara Tanindrazanay" no tonga teo amin'ny toerana mahazatra ahy aho. Hanomboka ny fotoam-pivavahana dia nahatsikaritra andiana tanora tokony ho 30 teo ho eo aho (50 hoy ny hafa) hita miharihary fa tsy zatra an'Ambohijatovo no eo afovoamboany somary avaratra amin'ny kianja tsy tena maheno akory izay lazaina ery ambony sehatra fa mikonokonona mbola mitsangana miavaka amin'ny besinimaro. Ireo no be tabataba avyhatrany hoe "tonga dia action" fa tsy mahalala velively hoe fotoam-pivavahana no atao rehefa vita ny hira anankiroa an'i Madagasikara. Nolazaiko avokoa ny manodidina ahy hoe jereo ireo fa ireo no hanakorontana antsika. Tsy nisy niteny ny manodidina ahy izay nilazako... raha mba nanana camera manko aho. Hitako indray ny anankiray fa nisy niantso tamin'ny finday ary dia nihaino avokoa ny manodidina ireo tary tsy mazava ireo. Dia nandeha soa aman-tsara ny resaky ry zalahy. Izaho aneefa miantso olona amin'ny findaiko tsy mety mahazo mihitsy. Nanafatra ny manodidina ahy aho hoe araho maso ireo fa hanao zavatra, di alasa namonjy ny asa fa mitady ho tratra aoriana.
Inona tokoa, reko amin'izay fa nisy nanakorontana teny amin'ny sehatra rehefa hirava iny ry zareo tao. Betsabetsaka ihany koa ny olona hitako niala teo Ambohijatovo tamin'izaho niala teny. Mieritreritra aho fa mety ho olona tsy tia gidragidra tahaka ahy ireo olona ireo. Ny mahavariana ahy dia ny mbola nandehanana nilahatra ihany nefa efa fantatra fa efa niomana tamin'izao indrindra ireo mpitabataba ny "tonga dia action" ireo. Androany alatsinainy 20 avrily anefa no mba nahitana olona nandohalika maro nivavaka izany. Tsy gaga intsony aho avy teo raha nahita fa nisy nandoro ny fiara vitsivitsy tao amin'ny minisiteran'ny planina, any amin'ny tsy nandehanan'ny mpitolona, ary tsy ankasitrahako mihitsy ny fandoroana fananana mety ho an'ny tsy manantsiny tahaka itony.
Na izany na tsy izany dia tena nahatsiravina ny nahita ireto miaramila nitoraka baomba mpandatsa-dranomaso tao anatin'ny faritry ny hopitaly HJRA. Sy toy ny manafika inona manenjika olona amin'ny basy ao anatin'ny faritry ny hopitaly io. Tsipalotro tamin'ny sary tvplus ireo olona nandohalika niaraka nanandra-tsaina malagasy saingy atsasaka segondra ihany moa no nanehoan'io tele io azy. Hita fa biby aie ireto miaramila mpanao famoretana ireto e! Ninia aho nanao fohifohy ny zavatra ambarako androany satria mba efa nisinisy ihany ireo namoaka vaovao aty amin'ny siniben-tserasera. Mihevitra ny tsy hampisy ny hetsika eo Ambohijatovo intsony ny PM HAT Roindefo ka asa horavan'ny miaramila ve izany ny hetsika eny Ambohijatovo io talata io?
jentilisa, alatsinainy 20 avrily 2009 tamin'ny 23:42
Efa saiky hatory aho no nahita ny lahatsoratry ny namana avylavitra ka somary hanitsy kely. Tsy teny an-toerana aho fa izay araka ny nasehon'ny televiziona kosa no ambara. Ilay polisy voatifitra aloha dia polisy mpanangom-baovao manaraka ny tolona eny Ambohijatovo mandrakariva. Tsy voatery ho mpitolona izy fa maharaka tsara kosa ny zavamisy eny ary manao tatitra amin'ny lehibeny izay hitany. Niaraka tamin'ny mpitolona izy raha nankeny Anosy, ary toy ny mpitolona rehetra ihany. Ny miaramila nandrava ny tolona no nitifitra io polisy ao amin'ny renseignement generaux io. Tonga teny Anosy ny mpitolona dia nipetraka soa aman-tsara tsy nanao na inona na inona (raha ny hita tamin'ny vaovaon'ny tvplus sy ny matv no ilazako azy). Raha iny nipetraka iny ny olona dia avy tampoka ny miaramila sy ny zandary tanaty kamiao 4 raha vitsy indrindra nandrava tamin'ny tifitra variraraka sy ny toraka baomba mpandatsa-dranomaso. Teo ny olona vao nisahotaka. Tsy mbola nisy fandoroana na fanimbana zavatra mihitsy nialoha io tifitifitra nataon'ny miaramila sy ny zandary io. Fa tsy azo fehezina intsony kosa ny olona rehefa notifirinao sy nanaovanao herisetra izy. Ataoko fa nialaina ihany ny nanao izay fanampim-baovao ampitaina aminareo izay.
Miditra dingana faharoa ny hetsika fitsipahana ny fanonganam-panjakana
2009-04-18 @ 21:56 in Politika
Hiezaka mandrakariva aho ny hanafohy araka izay tratra ny zavatra soratana etoana. Araka ny hita taratra tokoa dia miditra amin'ny dingana faharoa tokoa ny hetsika fitsipahana ny fanonganam-panjakana sy ny famerenana ny ara-dalàna eto Antananarivo. Somary mampihomehy ihany ny toe-draharaha raha mahita ny fomba filazan'ny sasany. Misy dia misy tokoa ny sorena amin'ity hetsika eny Ambohijatovo ity. Samy manana ny sainy moa ka tsy anomezako ny tsiny ny sasany loatra.
Nanaraka ny dia nataon'ny vehivavy 'mpankasitraka ny ara-dalàna' nanao sit-in teo anoloan'ny HCC Ambohidahy aho tamin'ny alakamisy 16 avrily 2009. Tena nahafinaritra ny nijery azy ireo tamin'ny akanjo fotsy. Ny hitako aloha no ambarako fa tsy mijery izay lazain'ny olona hafa any aho. Feno tsara ny arabe manomboka eo anoloan'ny 'alliance française' taloha sy ambadiky ny pergola Antaninarenina mandra-pahatonga ery anoloan'ny tohatohabato miakatra mankany amin'ny foiben'ny arema taloha sy ny foiben'ny PSD lasa PSM ary lasa tranon'ny Minisitera iny. Tokony ho naharitra ora iray sy sasany teo no nipetrahan'ny dry zareo teo amin'io toerana io. Nihira hiram-pivavahana ry zareo nandritra ny fipetrahana teny. Avy eo moa dia hitako avy any i Manandafy (izay notendrena ampahibemaso ho praiminisitra afaka ora roa taty aoriana) sy Olivier Rakotovazaha narahina Komandà sy Kolonely manao beret maintso niala avy tao anaty fiara iray. Nanofahofa tanana moa izy taorian'izay ary noraisin'ny vehivavy tao anatin'ny horaka ihany koa.
Araka ny tsilia-tsofina, ny tena nanaovana io sit-in teo anoloan'ny HCC io dia ny hakan'ny mpikambana ao amin'ny SADC sary ny vehivavy miaraka amin'ny voninkazo ka hampita ny sary any amin'izay tiany handefasana azy any (mety ho tahaka izany ihany koa ny niafaran'ny fandehanan'ny mpanao fihetsiketsehana teny Anoloan'ny Hotel Carlton Anosy androany sabotsy 18 avrily 2009 iny ary nahavoriana olona maro tokoa). Ny tena nahavariana tamin'ity tranga androany maraina teny Anosy ity dia ny fotoana nahatongavan'ireo mpitandro ny filaminana izay maifanakaiky amin'ny nahatongavan'ny masoivoho frantsay, izay tsy fantatra na efa nanoloatra ny taratasy maha-masoivoho azy na tsia aloha hatramin'izao, ary hiteraha ahiahy amin'ny olona mandrakariva.
Raha mamaky ny gazety isika dia efa tamin'ny zoma 10 avrily 2009 no efa nanendrena ny Praiminisitra Manandafy Rakotonirina. Hitantsika anefa fa ny alakamisy 16 avrily 2009 vao novakiana ampahibemaso io fanendrena nataon'ny filoha Ravalomanana io. Midika izany raha ny tokony ho izy fa efa namakafaka lalina ny amin'izay tokony hatao sy tokony hotandremana ny mpitarika ny hetsika vao namoaka iny taratasim-panendrena iny. Azo lazaina fa anisan'ny betsaka indrindra hatramin'izay ny olona tafavory teny Ambohijatovo tamin'io andron'ny alakamisy io satria dia tsy azo nipetrahana intsony ny kainja fa samy nitsangana nifanety ny olona rehetra teny anoloan'ny sehatra. marihina mandrakaria ho anareo izany tsy manatrimaso fa misy olona ihany koa, ary tsy vitsy, nomihaino ny kabary aty ambadiky ny sehatra aty ary mety mahatratra ny atsasaky ny olona any anoloan'ny sehatra any aza.
Ny mampisalasala ahy dia ny nahasahian'i Manandafy niteny fa eny amin'ny Lapan'Andafiavaratra izy no handray ny masoivoho sy ny mpandraharaha ny ampitso zoma 17 avrily 2009. Nahagaga ihany io ka nahatonga ny eritreritra hoe efa an'ny mpanaraka ny ara-dalàna ve izany ny ao amin'ny OTME : Office de Transmission Militaire de l'Etat izay karazany miambina io tranom-bakoka io? Ny ampitso tokoa moa dia tena zandary sy miaramila be dia be tokoa no niambina ny toerana teny ka tsy nahafanahana nankeny. Efa nieritreritra mihitsy izahay tamin'io hoe hanafika ny any Andafivaratra izany ny ao amin'ny Capsat nefa tsy dia nahitana izany loatra moa. Mampanontany tena ihany noho izany ny antony nilazana mialoha ny toerana Andafiavaratra raha tsy azo akory ny tena nefa nitombo ny hagagako rehefa nahita ny filazana any amin'ny tranonkala hafa aho hoe "karakaraina fatratra handraisana an'i Manandafy ny eny Andafiavaratra hatry ny omaly (zoma)". Eo amin'ny sehatra ara-miaramila eto Madagasikara moa dia misy hatrany ny fanasavoritahana ny zava-misy mba tsy ahafahan'ny hafa mahafantatra izay tena paik'ady kobonina. Inona tokoa moa izany no tena nokendren'i Manandafy sy ny tariny tamin'ny fitenenana io toerana io?
Na izany na tsy izany dia nahavariana tokoa ny nahita ny karazana fisavoritahan'ny mpitandro ny filaminana ny andron'ny Zoma. Niteny manko ny Praiminisitry ny 'mpamerina ho amin'ny ara-dalàna' fa haterina any amin'ny toeram-piasany ny depiote sy ny senatera', ary dia be dia be ihany koa ny mpitandro ny filaminana nivezivezy nanerana an'iny Tsimbazaza iny. Tsy nametra fotoana na oviana na oviana anefa ny Praiminisitra raha nilaza izany. Hitantsika any amin'ny tranonkala hafa angamba ilay filazana nataon'ny HCC hoe tsy foana ny antenimiera roa tonta satria tsy nisy lalàna na fehezan-dalàna nametraka izany, noho izany dia mbola miasa ara-dalàna ireo antenimiera roa tonta ireo... namaly moa ny minsitry ny fitsarana HAT fa efa nesorina tamin'ny asany avokoa ireo mpikambana ao amin'ny HCC ireo. Midika izany fa narodan'ny HCC avokoa ny andrim-panjakana ara-dalàna rehetra teto Madagasikara. Fahadisoana lehibe izany nataony izany, matoa niezaka ny Praminisitra hamerina amin'ny asany ny depiote sy ny senatera dia ny ahafahany mahazo fankatoavana haingana amin'ny sehatra iraisam-pirenena... izay fihetsika izay no tsy mety eken'ny mpanongam-panjakana... nefa raha nanaiky ny mbola nijoroan'ireo izy dia mety ho haingana kokoa ny nahazoany fankatoavana amin'izay sehatra iraisam-pirenena izay. Fambara ihany koa izay fa mahay ny sehatra iraisam-pirenena tsara Manandafy sy ny mpitolona raha miezaka hanome lanja ireo depiote sy senatera naongan'ny HAT ireo. Raha mba takatry ny HAT manko izany...
Faramparany sahady, androany sabotsy 18 avrily 2009 moa no nandehanan'ny PHAT indray tany Toamasina. Efa nisy ihany moa ny nanamarika ny famoriana olona nataon'ny sasany ny zoma 17 avrily 2009 teny anoloan'ny tahaka Rarihasina (ex-rené depui). Gaga aho raha niala nialoha teny Ambohijatovo noho ny asa tsy maintsy vonjena, ka nandalo teo amin'io toerana voalaza io sy teny amin'ny kianjan'ny 13 mey nadiodio tanteraka teny fa tsy nahitana ireo mpitoratoraka ny 'mpanaraka ny ara-dalàna' nefa ireny ankizy mpisisika mangataka aminao izay mandalo eny, sy tsy nahitana loatra ireny atahorana hanendaka ireny mihitsy tamin'ireo toerana ireo androany. Dia lasa ny saiko nanao hoe nentin'ny Jeneraly Alain Ramaroson tany Toamasina daholo angamba izy ireny mba hahita ranomasina sy ho ireo mafana fo anoloan'ny sehatra fikabariana indrindra any ary higidraka amin'izay olona mety ho sahisahy manaratsy an'i Andry Rajoelina any. Teo aho vao niaiky ihany koa fa mety homarina ihany ny filazan'ny solontenan'ny tany sambava nankaty Antananarivo hoe nandritra ny fandalovan'ny PHAT tany iny dia tena nahery dia nahery ny fandrobana sy ny fanendahana ary ny fampihorohoroana tany...
Farany, olona maromaro mihitsy no nilaza tamiko fa nandritra ny fodian'ny olona avy eny Ambohijatovo (ireo ramatoa lehibe maro dia maro angamba efa retirety tao amin'ny orinasa tiko ao raha ny fihevitry ny HAT no heverina) fa dia nihogahoga ny mpivarotra amoron-dalana hoe 'Aiza izao izay dada eo? aiza izao izay dada eo?' dia narahin'ny teny hoe 'hohanin'ny fozaorana i tenisany amin'ny alarobia izao'. Amin'ny alarobia manko no niteny i Alain Ramaroson fa hamory ny mpanohana ny 'tetezamita' rehetra ho eny Ambohijatovo. Angamba tsara miteny mialoha ny ny mpanao fihetsiketsehana eto Ambohijatovo hoe raha vao mandray an'Ambohijatovo ianareo dia horaisinay ny kianaj'ny 13 mey hihetsiketsehanay, inona re no hataon'ny jeneraly Alain Ramaroson? izaho mieritreritra hoe aleo entaina ho tonga maro dia maro ny rehetra amin'io alarobia io dia ho hita eo izay ataony e! handefitra lava eo ve? afaka mampivory ny mpanohana azy eo amin'ny kianjan'ny 13 mey anie ry zareo sady tsy hohelingelenin'ny mpitandro ny filaminana mihitsy e!
sabotsy 18 avrily 2009 amin'ny 23: 56
Nofiko halina tena ratsy dia ratsy
2009-04-17 @ 03:36 in Ankapobeny
Tsy afaka ny hanoratra lava tamin'izay zava-nitranga aho aloha androany noho ny tsy fahampian'ny fotoana hanoratana fa dia hitantara vetivety ny nofiko halina izany nanaitra ahy tamin'ny 4:34 minitra teo ary tsy nety nahitako tory intsony na dia tamin'ny sasakalina aza aho no namonjy fandriana. Noho izaho tsy mety nahita tory intsony no nahatery ahy hanoratra fandrao mba mety hisy fiovany tsy araka ny hitako ny ho fandehan'ny tantara.
Tao amin'ny nofiko ary dia nanana voay somary kelikely nefa masiaka izay, hono, aho; na manaraka io voay kely io hatrany, hono, aho. Tsy haiko nofehezina io voay io fa ny hany azoko nataoko dia ny nampitandrina ny manodidina hatrany io voay io any amin'izay alehany. Ny tena nanarihana ahy dia izay reniakoho niaraka tamina zanak'akoho mbola kely vitsivitsy nefa tsy nisaiko izay. Roahiko hatrany ireo akoho ireo tsy hanatona akaiky ity voay ity fa tsy mety mihitsy; mananontanona eo akaiky eo foana. Tampoka teo amin'izay, azon'ilay voay kely hita fa mitovy halavana amin'ilay reniakoho saiky hitsaingoka teo amin'ny vavany ity voatonona farany saingy afaka ihany ka ihataka kely. Taorian'izay, tsy hitako tampoka izay nanjavonan'ilay voay kely fa ny hitako teny rehetra teny dia nifantsitsitra avokoa ny ran'ireo akohokely tazako ary ny fijery azy dia tsy ho ela intsony ny fotoana hiainan'ireo akohokely ireo. Teo aho no taitra ary tsara indray ny manamarika fa tena nofiko izao halina izao io.
jentilisa, zoma 17 avrily 2009 tamin'ny 05:34
Vahoaka tsy manaiky lembenana ireo
2009-04-09 @ 23:01 in Politika
Hita taratra mihitsy ny alakamisy masina 9 avrily 2009 fa manana ny lohany tsy azo ahodikodina mihitsy ireto vahoaka mitokona etsy Ambohijatovo ireto. Tsy afa-mibaiko azy mihitsy ny mpitarika hany ka tena sahirana mihitsy maminavina izay tena ao an-dohan'ny ireto olona ireto. Efa noheverina ihany omaly fa aroso aloha ny fotoana noho ny maha alakamisy masina ny fotoana indrindra saingy tsy tontosa izany fampandrosoana ny fotoana izany. Nahoana angaha?
Nisy ny rodobe notanterahin'ny vehivavy mpandala ny ara-dalàna miaraka amin'ny vadi-miaramila sy zandary ary polisy (aoka homarihina fa tsy tena maro ireo vadin'ny foloalindahy lazaina ireo fa ny vehivavy mpandala ny ara-dalàna no tena maro) hitetezana masoivoho samihafa eto Antananarivo saingy ny teny Andraharo, misy ny masoivohon'ny Firenena Mikambana ihany no tena naleha. Hitondra taratasy mitaky ny hamerenana ny ara-dalàna no atao amin'izany. Azo heverina fa lalan-davitra no vitan'ireto vehivavy ireto satria eo amin'ny tokotany malalaka ampitan'ny fiangonana Jesosy Mamonjy ny fotoana. Mahavariana ihany koa fa betsaka noho izay nampoizina ry zareo no nanatontosa ity rodobe ity. Betsaka ihany koa manko ny vehivavy no nieritreritra fa famoanoan-tena izany handeha hamakivaky tanàna izany indrindra fa be ny mpankahala te-hanendaka. Kanjo dia marina tokoa ilay ohabolana vaovao manao hoe ny mitabe tsy lanin'ny foza ary maro ny lehilahy no niaiky ity hetsika nataon'ny vehivavy ity ary nifanontany hoe ahoana kosa indray ny antsika lehilahy?
Tonga teny Andraharo, sadaikatra ny mpitandro ny filaminana satria vehivavy maro no manatrika ny tena. Olona milamina rahateo no mifanatrika amin'ny tena. Vehivavy mitafy akanjo fotsy ambony sy foloara fotsy rahateo ho mariky ny filaminana sy ny fandriampahalemana. Tsy mandeha irery koa ireo olona ireo fa misy manara-maso ary ny mpanao gazety koa tsy ambakan'izany. Tsy maintsy naterina tany ambaravaran'ny masoivoho ihany ny solontena na ny mpitondra tenin'ireto vehivavy ireto, tsy misy tsy vitan'ny fifampiresahana tokoa! dia raikitra indray ny dia hizotra ho eny amin'ny kianjan'Ambohijatovo. Dia niniana natao ny nandalo ny kianjan'ny 13 mey fa tsy nisy ny nanakatsakana ary dia nijery fotsiny ireo nahiana hanao fanakorontanana. Tsy nisy intsony ve ny vola nanakaramana ireo mpiambina ny kianjan'ny 13 mey amin'ny fomba rehetra, sa noho ireto mandalo ireto vehivavy miara-dia no tsy nikasihana azy ireo? Horakora-pifaliana tsy nisy tahaka izany moa no nandraisan'ny teny amin'ny kianjan'Ambohijatovo ireto vehivavy maherifo ireto ary na ny fanamafisam-peo aza dia takona tanteraka manoloana izany horaka tsy nifandrenesana nandritra ny minitra vitsivitsy izany. Efa ho amin'ny iray ora nokasaina hamaranana ny fotoana no nahatongavan'ireto vehivavy ireto sy hanombohan'ny fotoana amin'izay.
Nandritra izany fotoana izany kosa dia tsy nanaiky ny hanombohan'ny fotoana mihitsy ny olona niatrika teto Ambohijatovo raha tsy tonga aloha ireto vehivavy mandala ny ara-dalàna ireto. Saiky hatomboka tamin'ny ora nolazaina fa tsy neken'ny olona mihitsy, nanandrana hanomboka indray ora iray taty aoriana fa mbola fandavana mavaivay no nisetra ny mpitarika. Voatery nionona tamin'ny fanentanana madinidinika ny mpitarika efa vaka dia vaka... Midika izany fihetsika izany amiko fa saro-piaro amin'ny fiaraha-mientana ireto olona mitokona ireto ary heveriny ho adidy masina no nataon'ny vehivavy maherifo ka tsy mety kosa raha antenatenam-potoana vao miditra ry zareo ka hisy ny zavatra tsy ho arany. Feno hipoka toy ny tamin'ny nahamaro isa azy indrindra hatramin'izay indray ny kianjan'Ambohijatovo androany, farafaharatsiny nitovy isa tamin'ireo tonga tamin'ny 28 marsa 2009. Nandeha avy eo ny Hiram-pirenena andininy telo sy ny Madagasikara tanindrazanay andininy telo (miaraka amin'ny totohondry mivonkona miaramisandratra sy miaramidina toy ny manao famindra miaraka) ary ny fotoam-pivavahana izay tena voahaja tokoa (tsy nisy nisiotsioka na niresadresaka loatra). Ary dia nandeha ny kabary vitsivitsy izay nandehanan'ny antso am-pinday tampoka nataon'ny filoham-pirenena Marc Ravalomanana nankasitraka ihany koa ny nataon'ny vehivavy tamin'ity alakamisy masina ity.
Hitamberina kely ny tamin'ny andro avy orana indray aho nefa dia mbola niatrika teto Ambohijatovo ihany ny olona. Be dia be tokoa ny elo ary dia nisy ihany koa ny fihetsika nahafinaritra nanaovana ny elo. Teo aloha ny nahofahofa toy ny fanao tamin'ny tanana ihany ary teo ihany koa fiarahamanodina ny elo toy ny tandrimo hany ka toy ny manao fety anaty orana izany avokoa ny olona. Tsy nampoizina ihany koa ny fahamaroan'ny olona tamin'iny fotoana iny ary izay no mety nandrisika ireto olona ireto ho avy maro ihany koa io alakamisy io. Ireo dia efa ampy ilazana fa na tsy misy aza ny mpitarika dia mahafantatra tsara ny ataony ny olona vory eto ary mahafantatra ihany koa ny tanjona nokendreny.
Tena nandrasan'ny maro ny fanendrena praiminisitra vaovao nefa moa dia iaraha-mahalala fa tsy nisy izany fanendrena izany. Nanao fampanantenana poak'aty ve ny mpitarika sa inona no nahatonga ny fanendrena tsy ho tontosa indray? Vakio indray mandeha izay nosoratako tamin'ny farany fa hoy aho hoe: "Ny dingana sarotra manaraka dia ny fanendrena izay ho praiminisitra, voakabary teny Ambohijatovo, fa hataon'ny filoha Ravalomanana amin'ity herinandro ity rehefa tsy hisy ny dinika eo amin'ny roa tonta". Soa ihany fa efa nosoratako ary dia avoitrako mazava tsara ny soratra manao hoe "rehefa tsy hisy ny dinika eo amin'ny roa tonta". Eo no nisy tsy fahaizan'ny mpitarika niteny tamin'ny alakamisy masina, tsy hainy ny nampitamberina an-tsain'ny olona fa rehefa tsy misy ny dinika vao hatsagana ny praiminisitra vaovao, noho izany tokony hisy lanjany tsara ny tenin'ny mpitondra tenin'ny TIM hoe: "nanaiky hifampidinika ny ankilany". Efa voalaza tsara manko fa hitohy ny fifampidinihana eo amin'ny roa tonta ny Zoma 10 avrily 2009, noho izany tsy dia mahamaika indray ny hanendrena izany praiminisitry ny governemanta mandala ny ara-dalàna izany. Izay no fihevitry ny mpitarika ny hetsika amin'izao fotoana izao nefa mba tsara ihany ny hahalalan'ny mpitarika ny resaka sy teny ataon'ny olo-tsotra mpanaraka ity tolona hamerenana ny ara-dalàna hanjaka eto amin'ny firenena ity.
Eo amin'ny olona amin'ny ankapobeny dia heveriny fa fahadisoana ny mifampiraharaha amin'ny mpandrobam-pahefana sy mpampihorohoro. Efa izay ny fahadisoana nahazo ny filoha dia toa ikirizana ihany ny hanaovana fifampiraharahana. Tsotra ny takian'ny olona. Miverina amin'ny toerany ny andrim-panjakana nofoanana tamin'ity lazaina fa "tetezamita" ity, indrindra fa ny fahefan'ny filoham-pirenena izay nofidiam-bahoaka tamin'ny alalan'ny fifidianana. Tsy zakan'ny olona mihitsy ny mieritreritra hoe ho fanao rehefa misy ny tsy mankasitraka izay ataon'ny mpitondra ny mampiasa hery hanonganam-panjakana ka manitsakitsaka ankitsirano ny zon'ny mpifidy manerana ny nosy. Tsy te-hahalala ny olona fa izay ihany ny azy no takiany ary vonona ny hiaro ny tarigetrany ireo olona ireo ho anatra ho an'izay mitady hieritreritra fanonganam-panjakana eto Madagasikara any aoriana any. Izaho manokana dia mahita fa fisainana tena demaokratika mihitsy izany fomba fisainana izany ary mety tsy nampoizin'ny mpahay politika maro nihevitra ny hitondra ny vahoaka amin'ny sangany.
Dia ahoana indray ny amin'i Tabera Randriamanantsoa nolazaina fa nantsoin'ny filoham-pirenena ho praiminisitra. Tao amin'ny vaovao Tvplus ihany moa izy ity no tena nasongadina. Nilaza moa io lehilahy io fa tsy Ravalomanana mivantana no niantso azy fa ny mpitarika ny tolona teny amin'ny kianjan'ny demaokrasia no nifampiresaka taminy, nametraka fepetra izy fa mbola miandry ny faneken'ny filoha Ratsiraka sy ny filoha Zafy vao mety hiditra amin'izany ary tsy maintsy mitoetra ho PHAT ihany i Andry Rajoelina. Mbola vao resaka no natao nefa dia natatatata sahady ho karazana fanakorontanana ny sain'ny olona, ataon'ny tvplus, araka ny fijeriko azy.
Izay indray aloha no voasoratra, fa azo lazaina fa efa voarain'ny mpitarika ihany ny hafatra fa fepetra tsy azo ihodivirana ny famerenana ny ara-dalàna sy ny andrim-panjakana eken'ny lalàna vao mety hizotra ny fifampiresahana. Voamariko ihany koa fa tsy tena tsy azo ifampiresahana ny amin'ny hijanonan'ny HAT ny olona fa ny ara-dalàna mijoro indray ihany no tena takian'ny olona.
jentilisa zoma 10 avrily 2009 amin'ny 1:01
Tsy vahaolana ny miraviravy tanana!
2009-04-06 @ 23:06 in Politika
Misy ny manoratra any ho any hoe: "tsy vahaolana ny mikiry biby!" (le jusqu'au boutisme n'est pas une solution). Misy ny mamerimberina mandrakariva any amin'ny fampielezam-peo milaza ho mpanao famakafakana politika sy toe-karena ary sosialy any fa efa mihamilamina sy mihamiverina amin'ny laoniny ny fiainana andavanandron'olona. Lazainy fa toerana vitsivitsy kely tsy dia manao ahoana sisa no mbola miezaka ny manakorontana ny toe-draharaha eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Minia mijery ivelany araka izay azo atao izy ao anatin'izany famakafakana izany fa ny iniany tsy jerena dia toerana manan-danja eo amin'ny lafiny politika sy sosialy indrindra ireo toerana lazainy fa vitsy tsy dia manao ahoana ireo. Ny fivezivezen'ny olona eny an-dalana mihamaro sy ny fitohanan'ny fiarakodia manerana an'Antananarivo, izay lasa voninahitra indray fa tsy henatra noho ny tsy fahaiza-mandamina sy tsy fahaiza-mitsinjo ny fandaminana ny fifamoivoizana, no tiana asongadina mandrakariva. Minia tsy mijery izay any an-tranon'ny olona any izy mamelabelatra izay tiany tenenina. Izaho koa etsy andanin'izany tsy afaka mihambo ho mahalala izay any an-tokatranon'ny olona tsirairay any fa dia tery hilaza izay fantatro kosa.
Ny asanay mpiray tampo... mihapotika avokoa!
Tsy nahazo alalana tamin'ny rahalahiko aho manoratra izao zavatra izao. Telo mirahalahy izahay no mpiray tampo, tsy manana anabavy. Samy nanana ny asanay avokoa izahay. Tsy misy itovizany avokoa ireo asanay ireo ary samy manana ny lehibeny ihany koa. Ny iray dia (cadre) miasa amina orinasa malagasy manana ny lazany (efa hotononina hoe nanana ny lazany atsy ho atsy raha tsy misy ny fiovana). Ny vadiny dia niasa tamina orinasa frantsay manana ny lazany eto Madagasikara saingy niala roa taona lasa izay noho ny karazam-paneriterena isan-karazany sy noho ny karama kely loatra indrindra indrindra (manontany izay Malagasy rehetra miasa amina frantsay eto Madagasikara aho, mba manao ahoana tokoa ny karamanao raha miohatra amin'ny andraikitra sahaninao?) ... ampy namelomana ihany manko ny karaman'ny lahy fa mivadika moa ny tantara ankehitriny... Ny iray hafa kosa indray (cadre) miasa amina tetikasa eto Madagasikara, mpitaintaina isaky ny faran'ny taona fa mety ho voaroaka noho ny vokatra mety tsy hahafa-po araka ny fijerin'ny lehibe azy. Noho ny toe-draharaha politika misy amin'izao fotoana izao dia tapaka tarangana ny famatsiam-bola ho amin'izany tetikasa izany. Nitsahatra izany ny asany amin'izao fotoana izao ary tsy fantany intsony izay mety ho avin'ny tetikasa sy ny ho avin'ny fiainany, tsy miasa intsony izy amin'izao fotoana izao. Any ivelan'Antananarivo avokoa ireo rahalahiko roa ireo no miasa sy monina. Ary izaho kosa mba manao ahoana?
Ianareo mpamaky dia mahafantatra tsara fa tena tsy tiako velively ny milaza ny mombamomba ny asako ary tsy tokony atao velively ihany koa aza izany. Mampisy olana eo amin'ny mpiara-miasa sy ny mpampiasa manko izany toe-javatra izany ( ary mety hisy fiantraikany amin'ny mety ho asako rahampitso ihany koa) , ny tena loza dia efa nampiseho ny sariko aho ka mety misy ihany koa ny mahafantatra hoe aiza moa aho no miasa. Halohalika anefa ny ranombary hoy ny fitenenana izay, tsy fantatro intsony izay hitranga rahampitso. Koa raisiko ho andraikitro manontolo ny zavatra soratako etoana. Miasa amina orinasa frantsay aho, lazaina hoe (cadre) saingy anarany fotsiny aho (azo hanambakana amin'ny ora iasana nefa tsy handraisana "ora fanampiny") . Amin'izao fotoana izao dia mbola mihazohazo eo ambony hatokay ny antsoina hoe "chômage technique", fa efa mifandimby maka "congé" avokoa moa izahay amin'izao fotoana izao mandrapahalanin'ny zonay amin'io zavatra iray io, tapitra izay dia tonga ny "tsy fisian'asa" ary dia tsy mandray karama araka ny andro tsy iasana mazava loatra ary mety hiafara amin'ny "fandroahana tanteraka" rehefa avy eo. Ao ambadik'izany rehetra izany dia voatery hiasa mafy ny rehetra raha tsy te-ho voaroaka, dia mety ho adino tsikelikely ihany koa ny zon'ny mpiasa (sanatriavina). Azo lazaina ihany koa eto fa mihozongozona ny asako amin'izao fotoana izao. Dia raha sanatria moa izany...? nefa dia lazaina fa ny (fitondram-panjakana) frantsay no ao ambadiky ny fanonganam-panjakana nisy teto Madagasikara sy miezaka mafy mba haneken'izao tontolo izao ny "tetezamita" ankehitriny, izany hoe ny orinasa frantsay no hahazo vahana sy tombony indrindra mandritra izany fotoana izany farafahakeliny.
Ny azo lazaina ho tigetranay teo amin'ny fiainana
Efa nosoratako ihany tany aloha tany fa tsy mba nanofinofy izay hivoaka any ivelan'i Madagasikara mihitsy izahay telo mirahalahy ireo. Tsy fantatro loatra ny anton'izany fa tsy mba nampitsiriritra anay mihitsy izany hivoaka an'i Madagasikara izany, ary tsy nihevitra velively ny any ivelan'i Madagasikara ho paradisa izahay, noho ny fitaizana angamba. Ny mety ho tsy zakanay ihany koa dia ny fanandratana ny teny frantsay ho ambony indrindra, koa na tsy mahay na inona na inona aza nefa mahay teny frantsay dia izay no atao hoe mahay. Nampianarina teny frantsay manokana mihitsy anefa izahay telo mirahalahy ary tahaka ny mihaino teny Malagasy ihany ny hihainoanay teny frantsay amin'ny ankapobeny. Nefa dia karazana fahafinaretana ho anay mihitsy izany fandaharana niresaka Madagasikara tamin'ny fahitalavitra izany taloha. Andeha ataonay hoe faharesen-dahatra tao anatinay ny fahitana fa eto amin'ity Madagasikara ity ihany no tena ahitana zavatra maro mahafinaritra.
Etsy ankilan'izany ihany koa, tsy nampazoto anay velively izany hiasa amin'ny fanjakana izany na dia nandresy lahatra anay matetika aza ny rainay, any manko azo antoka ny karama sy ny retirety. Asa! Ahoana koa angaha ny anton'izany? Izy mivady ray aman-dreninay dia samy mpiasam-panjakana avokoa, mpiasam-panjakana niasa amin-joto fa tsy mba irony nanao hoe telopolo andro ny iray volana irony. Renay matetika fahakely ny menomenona ny afera maizina ataon'olona sasany, halatra mivantana amina miliara, nefa dia afaka eny amin'ny fitsarana hatrany rehefa toriana sady misy fanampiny hoe tsy maintsy averina amin'ny asany ary omena azy avokoa ny karama sy ny tambin-karama rehetra izay tsy mbola azony fa fotoana nampigadra azy ireny. Mety hialanay amin'izany fositra mety hiteraka lonilony izany angamba no tena nandrisika anay tsy te-hiditra ho mpiasam-panjakana mihitsy... Nefa amin'izao fotoana izao toa iniana ampanjakaina miharihary eto amin'ny firenena izany gaboraraka izany ary tadiavina tsinontsinoavina ny lanjan'ny asa sy ny fahazotoana miasa, fa ny mangalatra sy ny manendaka ary ny mandroba no fomba mora sy tsotra indrindra hampanakarena, ary ny mpanao izany no ampanjakaina eo amin'ny fiainana andavanandro!
Raha ireo no tantaraiko aminao, tsapanao ve fa nahazo tombontsoa izahay nandritra ny fotoana nitondran-dRavalomanana? Koa raha andeha ihany atao hoe izany, toa ny antom-pivelomanay mihitsy no potehina amin'izao fotoana izao? Mba azonareo eritreretina ve ny fiantraikan'izany hoe niasa izahay teo, nefa samy tsy hanana asa avokoa (100%) rehefa avy eo (izaho irery sisa nefa efa ambivitra ihany koa!)? Dia tahaka ny ahoana araka ny fijerinareo ny mety ho fihevitray raha mahita soratra manao hoe "tsy vahaolana ny mikiry biby!" (le jusqu'au boutisme n'est pas une solution) izahay? Azonareo vinaniana ve ny zavatra mety ho vitako rehefa tonga ilay sanatria? Noho izany, raha mandray anjara mavitrika amin'ny fihetsiketsehana aho (terena haka congé tsinona) dia ny hamerenana ny hasin'ny asa sy ny ezaka ataon'ny tsirairay no anton'izany fa tsy ny halatra no ampanjakaina eto amin'ny firenena. Raha mandray anjara mavitrika amin'ny fihetsiketsehana aho, noho ny tsy fanekeko na oviana na oviana ny fanitsakitsahana zoko tamin'ny fifidianana ary tsy hampazoto hifidy mihitsy raha toa ka tafatombina izao fitondrana nangalarina mivantana izao satria ho zary fanao eto amin'ny firenena. Izay tian'ny firenena hafa atao eto Madagasikara ihany ve izany no tsy maintsy tanterahina? Izany hoe miverina ho zanatany izany i Madagasikara! Fitaovana lehibe nampanjanahana an'i Madagasikara dia ny Malagasy ihany ary ny lohalaharana amin'izany dia ny avara-pianarana mihitsy... indrisy, ary ahiako ho mizaka ny zom-pirenena frantsay avokoa ireo rehetra ireo.
Dia hanaiky lembenana ary ve?
Mety hisy aloha aminareo mpamaky ny hieritreritra hoe, mafy toy izany ve dia nahoana no mbola afaka mivoivoy amin'ny aterineto ihany? Efa nambarako hatrany fa ny lesoka lehibe eo amin'ny mpitolona hiverenan'ny "ara-dalàna" dia ny tsy nahaizana nifehy ny fifandraisana sy ny serasera ary anatin'izany ny aterineto, raha mbola manana izay kely anananako aho ka ahafahako mitolona izany dia ataoko soa aman-tsara, raha sanatria tonga ny tsy fidiny tsy afaka mivoivoy intsony akory atao fa efa karazan'ny resy tanteraka izany. Sao koa misy mieritreritra fa mandray vola aho mamelona ity bolongana ity? Eto no maharesy lahatra ahy amin'ny fandraisako anjara amin'ny famerenana ny ara-dalàna ka dia ikirizako hatrany raha mbola azoko atao ihany koa. Eto ihany koa aho no miteny tsy misorona ho an'ny hafa rehetra! Ataoko fa tsapanareo amin'ny gazety ihany ny fivakisana efa nolazaiko teto mialoha ny nivoahan'ireo gazety ireo. Manao arofanina aho raha manoratra ireny fa tsy voatery hoe manoratra noho ny fahakiviana!
Ny ampaham-piainanay ihany no notantaraiko anareo teo, fa mba manao ahoana avokoa ny fiainan'ireo manao fihetsiketsehana amin'izao fotoana izao ireo? Fa inona ny tombotsoa azonay tamin-dRavalomanana raha lazaina fa nangoniny ho azy samirery ny tombotsoa teto Madagasikara? Raha nangoniny ho azy samirery anie ny tombotsoa dia mba tsy nahazo tombotsoa ihany koa izahay e! Ny hita aza dia nivadika tamin-dRavalomanana avokoa ny mety ho nahazo tombotsoa taminy rehetra nefa very teny antenantenany teny izany tombotsoa izany. Koa nahoana moa izahay no tsy mba nivadika tahaka ireny very tombotsoa ireny? Ny antony hitolomanay tsy hamerina an-dRavalomanana amin'ny maha-Ravalomanana azy loatra (izay aloha no hitako amin'ny ankamaroanay) eo amin'ny toeran'ny filohan'ny Repoblika loatra fa ny hamerenena ny hasin'ny fiandrianam-pirenena nohosihosen'ny vola sy ny famerenana sata repoblikana navadiky ny miaramila tena mpamadika ny tanindrazana tsotra izao noho ny tombotsoa frantsay ary ny hanajana ny lanjan'ny demaokrasia nataonay tamin'ny alalan'ny latsa-bato fanao amin'ny alalan'ny fifidianana. Koa diso hevitra izay mihevitra fa hihena tsikelikely ny mpanao fihetsiketsehana satria "tsy misy intsony ny vola hamatsiana ny tolona", tsy nisy nandray vola noho ny fandraisana anjara amin'ny fihetsiketsehana mihitsy ireo olona ireo, fa ny herisetra mihatra amin'izy ireo isan'andro ihany no mety hampihemotra azy, saingy mihemotra amin'ny fandraisana anjara hita maso fotsiny izy fa mety tsy ho zakanao kosa ny fanapahan-kevitra mety ho vitany rehefa avy eo. Aza maniry ny hahalala izany fanapahan-kevitra izany velively anefa!
Manao ahoana ny dingana manaraka?
Voatery nilaza tamin'ny kabariny Atoa Tata Ambroise Ravonison fa tsy mivakivaky velively ny hetsika atao amin'izao fotoana izao. Mampiahiahy be ihany anefa ny zavatra ataony indrindra fa ny fiantsoana mpanao gazety manokana ataony amin'ny alalan'ny CSD_M (Comité Supérieur de la Démocratie à Madagascar). Azo heverina manko fa izy no manana vola nafafy be indrindra amin'ity tolona ity, mieritreritra ny fifidianana ho avy angaha izy! Tokony hieritreritra izy ny tsy hisehoseho be loatra fa manjary manimba ny tolona. Manahirana ahy ihany koa ny fitatatatany sahady ny zavatra tsy mbola tokony havoaka akory toy ny fialzana fa efa an-dalana ny filoha Ravalomanana. Tahaka ny manome sopapa ny miaramila izy hoe miasà ianareo miaramila sao tonga tokoa ny "Dada"n-dry zalahy ireto. Mba mahalala tsiambaratelo ihany koa anie izahay nefa izany tsy ihazakazahana holazaina mihitsy toa anambarana amin'ny besinimaro fa akaiky an'i "Dada" anie aho e! Sa natao hampitaintaina ny miaramilan'ny Capsat no anaovana ireny fanmbarana ireny? Mba heno ihany manko fa vao nosimbain'ny miaramila fatratra ny lalan'ny (piste) seranana fidinana sy fialan'ny fiaramanidina ao Antsirabe eo an-dalam-panamboarana io saingy raisiko ho tsaho ihany aloha izany.
Ny dingana sarotra manaraka dia ny fanendrena izay ho praiminisitra, voakabary teny Ambohijatovo, fa hataon'ny filoha Ravalomanana amin'ity herinandro ity rehefa tsy hisy ny dinika eo amin'ny roa tonta. Amin'ity fotoana ity dia tsy maintsy mametraka ny fifandanjam-paritra ihany koa ny filoha Ravalomanana fa tsy azony atao intsony ny manendry olona avy eto afovoantany. Tsy azony atao intsony ihany koa ny manendry olona efa hita fa "nivadika" taminy. Mora sarotra ny mitady olona avy any anindra-tany hotendreny amin'izany toeran'ny praiminisitra izany. Mora raha toa ka fantatra fa tsy mbola nivadika taminy izany olona izany, sarotra kosa raha toa ka efa mivadika aminy na matahotra ny handray andraikitra kosa izany olona izany... eto manko dia tsy mbola fantatra mihitsy ny ho avy politikan'izay hotendreny ho praiminisitra izay. Mety hisy ny hanana soso-kevitra amin'ny olona tokony hotendreny fa ny hitako aloha izao, raha mbola tsy nivadika izy dia Atoa Mahafaritsy Samuel, ilay nasolo an'i Lahiniriko Jean. Asa ianareo mpamaky,iza no heverina fa tokony ho praiminisitra?
Avelao hirehareha foana eo!
Hiresaka zavatra hafa indray aho. Efa niarahan'ny rehetra namaky angamba ny vaovao nilaza fa nisy miaramilan'ny praiminisitra voatifitry ny zandary tao Mahitsy tao. Tsy nanafina ny fitaovam-piadiany izy na dia efa tsy nanao fanamiana intsony aza (naderadera aza!) ary fandikana ny fifampifehezana eo amin'ny samy miaramila sahady izany. Manaraka izany dia tsy niraharaha ny sakana nataon'ny zandary tany an-toerana ihany koa, ny lalany ihany no notohizany. Porofo manambara ny fanjakazakany eto amin'ny firenena izany fihetsika nataony izany. Marika ihany koa hampitana amin'ny olona ny fihoaram-pefy ataon'izy ireo. Ny ahy moa lasa lavitra dia lavitra mihitsy ny saiko hieritreritra fa saika "hanao mission" indray ry zalahy miaraka amin'ny pick up mahazatra (nahamarika aho fa betsaka amin'ny fiaran-dry zalahy no tsy mipetaka ny laharan'ny fiara entiny).
Zavatra hafa ihany koa ny fandrahonana nahazo ny mpiasan'ny SAF FJKM nataon'ny miaramila hatrany, noho ny fanadihadiana ny loharanombolan'ity Sampan'Asa Fampandrosoana tantanin'ny FJKM ity. Asa hanao ahoana re ny mety ho fiantraikan'ny raharaha raha toa ka ny Akamasoan'i Pere Pedro no anaovan'ny miaramila toy izany? saingy tsy hisy izany satria manohana ny fitondrana tetezamita ry zareo! Tsy anjaran'ny miaramila mihitsy ny manao izany fanadihadiana izany e! Fa inona moa no tena kendren'ireto miaramila ireto? Ny hahalao monina izay tsy mifanaraka amin'ny heviny sy ny tadiaviny. Tetika hialan'ny QMM ireny mody fisavana ny orinasa manontolo sy ny entana rehetra tany Faradofay ireny. Efa andala-piasana manko izy ity ka tian'ny Frantsay horombahina amin'izay. Sotasota hanaovana izay hikatonan'ny tiko ireny fisavana ny fiaran'ny tiko noahiahina ho mitondra fitaovam-piadiana mahery vaika ireny (fa noho ny zavatra nokitikitihan'ny saofera tao anaty fiara tao dia lasa nivadika glace ny basy? Eisy aho hoe e). Ary fanenjehana mivantana ny FJKM ny fisavana ny entana sy ny fanadihadiana ny fihavian'ny vola hamelomana ny SAF FJKM.
Efa mba renay ihany koa fa efa nalaina ny vary sy ny zavatra hafa any amin'ny birao misahana ny loza voajanahary (toy ny rivodoza) satria manko efa hifarana ihany izany fotoanan'ny rivodoza izany kanjo moa dia indro tonga tampoka i Jade... Hisy ve ny sakafo fanampiana izay mety ho tra-boina amin'ity rivodoza ity? Efa mba renay ihany koa ny fakana ny varin'ny voafonja (vary nambolen'ny voafonja) mba hohaniny tahaka ny any amin'ny faritra boeny, saingy mbola ambany zo noho ireto mitady hovelomim-potsiny ireto moa ny voafonja ka dia adino teo ny mba fisasaran'ny hafa. Mba nosainina ve fa mety haharesy lahatra ireto voafonja ireto indray izany zaatra mihatra aminy izany ka hiheverany hoe aleo ihany mangalatra raha izany fa izay mba nisasarana ity toa alaina aminay ihany koa? Na izany aza aloha, aleo hisokatra ny fanadihadiana fa mba manome sopapa ny mpanao gazety izahay raha mahasahy miditra lalina ry zareo. Efa lava loatra ihany koa izany lahatsoratra izany fa aleo indray amin'ny manaraka. Averiko indray: raha hametraka hevitra ianao dia soraty vakiraoka (brouillon) aloha izay tianao ampitaina dia ankotriho (actualiser) ny lahatsoratra vao apetakao ny solon'anarana sy ny hafatra ary averinao ny marika angatahin'ny authimage.
jentilisa, talata 7 avrily 2009 amin'ny 01: 06 maraina
Mbola mipatitaka indray ny mpitsipaka tetezamita!
2009-04-04 @ 06:04 in Politika
Ahitan-javatra mihitsy ny toe-javatra amin'izao fotoana izao. Tsy maintsy ho gaga daholo ihany izay nahita ny filohan'ny Antenimieran-doholona teo aloha lasa masoivoho any Suisse amin'izao fotoana izao, Atoa Rajemison Rakotomaharo, nanatrika ny fihaonam-be karakarain'ny fitondrana tetezamita afak'omaly sy omaly zoma 3 avrily 2009. Tena nanana fahasosorana anaty tokoa ve matoa mahavita miseho vahoaka tahaka ireny? Tsy lazaina intsony ny an'i Zenaide Ramampy anisan'ny birao foiben'ny TIM ihany koa. Raha ny fijery azy amin'izao fotoana izao dia vita tokoa ny tantaran'ny TIM. Antoko hafa indray angamba no hijoro raha hisy izany fa tsy nety mihitsy ny rafitr'ilay teo raha izao zava-mitranga ankehitriny izao no tarafina. Izaho koa moa efa nahita fa tsy demaokratika mihitsy iny antoko TIM iny. Efa hitako hatrany ampiandohana sahady manko fa misy ny vondron'olona tsy afaka hofidiana na oviana na oviana fa izay tapaky ny any amin'ny foibe ihany no tena izy ary izay fepetra izay no tsy nidirako tao amin'io antoko io mihitsy. Dia mety ho gaga ihany koa angamba ny mpamaky manaohoe ary toa mihamivadika tsikelikely koa i jentilisa izany? Tsia tompoko! Manana ny hevitro aho ka mijoro hatrany amin'izao hevitra nandresy lahatra ahy izay.
Hatrizay dia heverina fa ny eto Antananarivo sy Antsirabe, ary ny vao tsy ela akory izay no nanampy koa i Ambatondrazaka ihany no misy mpanao fihetsiketsehana mitsipaka ity tetezamita ity. Aoka anefa holazaina fa maro ihany koa ny avy any amin'ny faritra no te-haneho izany heviny manohitra ny fitondrana nangalarina izany saingy, voalohany miandry mpitarika izy ireny; faharoa, mba nisy ny natao hitarika tahaka ny tany Moramanga, saingy noho ny fandrahonana azo avy amin'ny mpanohana ny tetezamita dia nihemotra, fa tsy tia gidragidra loatra moa ny olona amin'ny ankapobeny. Ny mpamadika ihany koa moa efa maro dia maro, ka tsy fantatra intsony na entin'ny fo fotsiny na efa paika tafapetraka hatry ny ela no atrehina. Ny olona fanta-bahoaka fotsiny no hitan'ny rehetra, fa misy dia misy ny te-hanakorontana fotsiny izao ny hetsika fanoherana ny tetezamita, ary ao niainana indrindra izany nandritra ny fanomanana io fikaonandoha nokarakaraina teny amin'ny Carlton tamin'ny alakamisy 2 avrily 2009 io. Marihina mazava tsara fa ny fotoam-panomanana no lazaiko eto fa tsy ny andro nandritra ny fikaonan-doha notontosaina ny 3 avrily 2009.
Raha mba nanana fotoana ihany aho ny alakamisy voalaza io dia nanapa-kevitra ny ho eny amin'ny Carlton. Tonga tany tokoa ny tena ny folakandro tokony ho tamin'ny efatra ora tany ho any. Vao teo amin'ny fiantsonan'ny fiara aho dia ny fiara roa an'ny polisim-pirenena avy hatrany no hitako. Zendana ihany aho, nihevitra avy hatrany moa aho fa mety ho efa nisy fisamborana tao, saingy diso izany fihevitro izany. Hitako hatraty ivelany ihany manko ireo olona mijorojoro sy mivorivory eo amin'ny rihana voalohany. Noho izany, nandroso aho, niditra ny varavarana, niakatra ny tohatra ary nandeha nankeo amin'ny mpandray olona handray anjara amin'ny fikaonan-doha karakarain'ny parlemantera. Mazava loatra fa efa voafandrika sy efa voazara avokoa ny fanasana. Efa tsy tafiditra intsony ny tena, sady hisolo tena an'iza ihany koa moa? ny hitati-baovao no tena masaka tao an-dohako fa tsy matanjaka loatra moa ny sampan'ny fifandraisana sy ny serasera amin'ity vondron'olona mitsipaka ny tetezamita ity. Dia lasa koa ny tena nihainohaino tamin'ny resaky ny olona amin'ny ankapobeny. Mazava loatra fa tsy afaka hilaza ny antsipirian-javatra mety hanohintohina ny hetsika aho. Matoa aho manoratra dia ho aro-fanina ho an'ny rehetra, hilaza fa vakivaky sahady ny tolona iaraha-manana.
Noho ity hetsika ity niainga tamin'ny olo-tsotra aloha voalohany indrindra dia olona samy manana ny heviny no mihaona sy mifampiresaka. Ny tanjona amin'ny ankapobeny dia mitovy ihany fa ny fomba hanatanterahana azy no tahaka ny tsy mba misy marimaritra iraisana loatra. Tsy mahagaga raha mipoitra sahady ny fisarahan-kevitra nefa ny tanjona ity mbola lavitra ihany. Ny maro amin'ny mpitarika amin'ny ankapobeny, resy lahatra amin'ny fanaovana ity fikaonan-doha hivoahana amin'ny krizy ity, avy eo mahita ny dingana manaraka irosoana. Misy ny mihevitra mafy ny fahafahana manao fihetsiketsehana eny amin'ny kianjan'ny 13 mey ihany, eo moa ny milaza fa tsy tokony ajanona mihitsy na ahoana na ahoana ity eto amin'ny kianjan'ny 13 mey ity. Eo ihany koa ny mametraka hoe maninona raha miainga hatreny Ambohijatovo indray? Fa ankoatra izay dia misy ireo mihevitra fa efa anaty ady isika koa tokony idirana tanteraka mihitsy izany ady izany. Ireo no mihevitra fa tsy tokony atahorana mihitsy izany miaramila izany. Milaza tsotra aho fa tsy mahafantatra izay antsipiriany tian-dry zalahy ahatongavana kosa. Mieritreritra aho fa mety ho avy amin-dry zareo ireto ny nahavita nitoraka grenady tany Ambohitsorohitra ny alin'ny alarobia hifoha alakamisy iny, ary mety ho ry zareo ihany koa no mbola nahavita ihany koa ny fanafihana alin'ny alakamisy hifoha zoma saingy tsy nahare ny akony afa-tsy tany amin'ny forum moov moa aho; tsy fantatro mazava loatra ihany koa na mbola Ambohitsorohitra ihany no notafihina na toeran-kafa indray. Raha ity vondrona farany lazaiko ity moa dia efa karazana 'ady anaty akata' mihitsy no efa idirany. Ny tanjona iraisan'ireo rehetra tsy mety mifanara-kevitra ireo dia ny hampisehoana hoe "tsy milamina velively eto Antananarivo".
Mety ho lasa eritreritra ihany angamba ianao hanao hoe: mety ho samy manana ny anjara asany fotsiny ireo olona ireo fa anaty fandrindrana fotsiny izany. Tsia! efa hita ho mifampisintasintaka araka ny heviny mihitsy ny mpitsipaka ny tetezamita. Taratr'izany fisarahan-kevitra izany ny zavatra saiky hatao omaly zoma: efa mba noheverina ihany fa rehefa misy ilay fikaonan-doha teny Anosy, dia nisy ny nikiry hoe tokony hasiana fihetsiketsehana hatrany eo amin'ny kianjan'ny 13 mey. Nekena tsy fidiny io hevitra io noho ny feo niha-niakatra... ary dia nolazaina fa ho fotoam-pivavahana hahatsiarovana ny maratra sy ny maty hatramin'izay no hamoriana ny olona. Efa azontsika vinaniana amin'izany ny fisamatsamahana misy. Dia mbola azo tarafina ihany koa ny fotoana telo samihafa voalaza fa hanatontosana ny hetsika ny Sabotsy 4 avrily 2009. Misy ny milaza hamory olona eny Ambohijatovo satria eo no heverina ho azo antoka indrindra rehefa mivory nefa tsy misy fiantohana intsony raha vao miala eo an-toerana, eo ireo te-hifampigidraka amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny mpandroba eo Analakely tsotra izao, fa ny narahin'ny besinimaro kokoa sy hany nolazaina tao amin'ny radio mada dia ny sit in hatao eny Andraharo manoloana ny biraon'ny Firenena Mikambana ary ny heviny moa dia hoe dingana hanairana ny Fiarahamonina Iraisam-pirenena no hatao fa tsy ny hanaiky halatsa-dra eny amin'ny 13 mey isan'andro.
Marihina fa SAMBANY indray teo amin'ny tantaran'i Madagasikara, taorian'ny tifitra nataon'ny FRS tamin'ny 13 mey 1972 no nahasahy nitifitra olona efa tafavory teo an-kianja (13 mey) ity ny mpitandro ny filaminana tamin'ny 2 avrily 2009. Tsy nanao izany Ratsiraka tamin'ny 1991 na dia nalaza aza fa mety hahavita izany ny RESEP. Tsy nanao izany ihany koa Ravalomanana na dia malaza ho mpanao didijadona aza, fa nahavita izany kosa i Andry Rajoelina satria tsy zakan'ny miaramila mihitsy ny mieritreritra ny mety hiverenan-dRavalomanana takian'ny mpanao fihetsiketsehana ankehitriny, noho no sazy fantany fa hiandry azy. Marihina kosa fa tsy milaza ny fanakanana olona tsy ahatongavana eny kosa aho. Ataoko fa efa saiky nanao izany fihetsika izany kosa ny mpitondra nifandimby rehetra teto. Marihina fa faritra roa no nokendren'ny zalahy tamin'io 2 avrily io; ny faritra iray teo afovoan'ny mpanao fihetsiketsehana efa tafapetraka amin'ny tany mihitsy; ny faritra iray kosa teny amin'ny mpanentana ka anisan'ny voa mafy ihany ny iray amin'ny mpanentana ny fihetsiketsehana hatramin'ny sabotsy 21 marsa 2009 lasa teo. Mazava loatra fa ny hamotika hatramin'ny fakany ny tolona no tanjona, ary tsy atao mahagaga raha nafangaron-dry zalahy potiby hiparitaka ny baomba tokony hakarenintsofina fotsiny sy handatsa-dranomaso fotsiny.
jentilisa, sabotsy 4 avrily 2009 amin'ny 1:44 maraina